ဂရီးလစ်ရှ်၊ ဟယ်ရီကိန်း၊ ဒီကလန်ရိုက်စ်တို့ထဲက မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံးအင်္ဂလန်ကစားသမားစံချိန်ကို ဘယ်သူချိုးဖျက်နိုင်မလဲ? – the One Sports Journal
ဂရီးလစ်ရှ်၊ ဟယ်ရီကိန်း၊ ဒီကလန်ရိုက်စ်တို့ထဲက မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံးအင်္ဂလန်ကစားသမားစံချိန်ကို ဘယ်သူချိုးဖျက်နိုင်မလဲ?
July 21, 2021 author one articles 0
ဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်း မီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေတာက ဂရီးလစ်ရှ်၊ ဟယ်ရီကိန်း၊ ဒီကလန်ရိုက်စ်တို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေပါပဲ။ ဒီကစားသမားတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်း (၅၅)နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ် အဓိကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုရဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာကလပ်အသင်းတွေမှာလည်း အဓိက,ကစားသမားတွေအဖြစ် ပါဝင်ကစားနေကြတာပါ။
ဒီကစားသမား(၃)ဦးကို ပစ်မှတ်ထားနေတာက ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့ဖြစ်ပြီး နှစ်သင်းစလုံးက’ ငွေကို ရေလို’သုံးနေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်သလို သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကို ကြိုက်ကြေးပေးခေါ်လေ့ရှိတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြောင့် ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေထိခိုက်မှုရှိနေတာတောင် ပြီးခဲ့တဲ့နေရွာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်းက စုစုပေါင်းပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း(၁၆၀)၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ပေါင်သန်း(၂၂၀)ကျော်သုံးစွဲခဲ့တဲ့အပြင် ချယ်လ်ဆီးအသင်းပိုင်ရှင်အေဘမိုဗစ်ချ် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ငွေကြေးအချမ်းသာဆုံးကလပ်အသင်းပိုင်ရှင်စာရင်းမှာ အဆင့်(၈)၊ မန်စီးတီးအသင်းပိုင်ရှင်ရှိတ်မန်ဆော်ရဲ့ အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၇)ဘီလီယံ၊ သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုက အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁)ထရီလီယံအထိရှိနေတာကြောင့်လည်း ဒီနှစ်သင်းဟာ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ ထင်တိုင်းကြဲခွင့်ရှိနေတာပါ။
အခုလောလောဆယ် မန်စီးတီးအသင်းက ဂရီးလစ်ရှ်နဲ့ ဟယ်ရီကိန်းကို ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းကတော့ ဟယ်ရီကိန်းနဲ့ ဒီကလန်ရိုက်စ်ကို ခေါ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားသမား(၃)ဦးရဲ့ လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ကြေးက ပေါင်သန်း(၁၀၀)နဲ့အထက်ရှိနေတာကြောင့် တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မြောက်ခဲ့ရင်တော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံလူ မက်ဂွိုင်းယားတင်ရှိထားတဲ့ အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံးစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တုန်းက လက်စတာအသင်းနောက်ခံလူမက်ဂွိုင်းယားကို နောက်ခံလူတွေထဲမှာ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြစ်တဲ့ ပေါင်သန်း(၈၀)နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုအချိန်အထိတော့ အဲဒီစံချိန်ကို ချိုးဖျက်မယ့်သူ မရှိသေးပါဘူး။ ဟယ်ရီကိန်းဟာ ဆုဖလားတွေရယူဖို့ စပါးအသင်းနဲ့လမ်းခွဲမယ်လို့ ယူရို-၂၀၂ဝပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက လူသိရှင်ကြားဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့သလို စပါးအသင်းက ဟယ်ရီကိန်းအတွက် ပေါင်သန်း(၁၅၀)အထိအလိုရှိနေပြီး ပေါင်သန်း(၁၀၀)တန်ကြေးရှိတဲ့ ဝက်စ်ဟမ်းကွင်းလယ်လူဒီကလန်ရိုက်စ်ကလည်း ထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာပါ။
ဂရီးလစ်ရှ်ကတော့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စကို ပြန်လည်စဉ်းစားမယ်လို့ မကြာသေးခင်က ဝန်ခံပြောဆိုထားလို့ ဒီ(၃)ဦးရဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ အခုအချိန်မှာတော့ မက်ဂွိုင်းယားဟာ အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပေမယ့် နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလပိတ်သိမ်းဖို့က (၅)ပတ်လောက်လိုသေးတာကြောင့် လာမယ့်ရက်တွေထဲမှာ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပါပဲ။
ဂရီးလစ္ရွ္၊ ဟယ္ရီကိန္း၊ ဒီကလန္႐ိုက္စ္တို႔ထဲက မက္ဂြိဳင္းယားရဲ႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးအမ်ားဆုံးအဂၤလန္ကစားသမားစံခ်ိန္ကို ဘယ္သူခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္မလဲ?
ဒီေႏြရာသီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကာလအတြင္း မီဒီယာစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေရပန္းစားေနတာက ဂရီးလစ္ရွ္၊ ဟယ္ရီကိန္း၊ ဒီကလန္႐ိုက္စ္တို႔ရဲ႕အေျပာင္းအေ႐ႊ႕သတင္းေတြပါပဲ။ ဒီကစားသမားေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ယူ႐ို-၂၀၂ဝၿပိဳင္ပြဲမွာ အဂၤလန္အသင္း (၅၅)ႏွစ္အတြင္းပထမဆုံးအႀကိမ္ အဓိကႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုရဲ႕ဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာကလပ္အသင္းေတြမွာလည္း အဓိက,ကစားသမားေတြအျဖစ္ ပါဝင္ကစားေနၾကတာပါ။
ဒီကစားသမား(၃)ဦးကို ပစ္မွတ္ထားေနတာက ပရီးမီးယားလိဂ္ထိပ္သီးႏွစ္သင္းျဖစ္တဲ့ မန္စီးတီးနဲ႔ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သင္းစလုံးက’ ေငြကို ေရလို’သုံးေနတဲ့အသင္းေတြျဖစ္သလို သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ကစားသမားေတြကို ႀကိဳက္ေၾကးေပးေခၚေလ့ရွိတဲ့အသင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
ကိုဗစ္ေရာဂါဆိုးေၾကာင့္ ကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနထိခိုက္မႈရွိေနတာေတာင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ေန႐ြာသီမွာ မန္စီးတီးအသင္းက စုစုေပါင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးေပါင္သန္း(၁၆၀)၊ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းက ေပါင္သန္း(၂၂၀)ေက်ာ္သုံးစြဲခဲ့တဲ့အျပင္ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းပိုင္ရွင္ေအဘမိုဗစ္ခ်္ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ ေငြေၾကးအခ်မ္းသာဆုံးကလပ္အသင္းပိုင္ရွင္စာရင္းမွာ အဆင့္(၈)၊ မန္စီးတီးအသင္းပိုင္ရွင္ရွိတ္မန္ေဆာ္ရဲ႕ အသားတင္ပိုင္ဆိုင္မႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၇)ဘီလီယံ၊ သူ႔မိသားစုတစ္ခုလုံးရဲ႕ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈက အနည္းဆုံးအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁)ထရီလီယံအထိရွိေနတာေၾကာင့္လည္း ဒီႏွစ္သင္းဟာ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေဈးကြက္ထဲမွာ ထင္တိုင္းႀကဲခြင့္ရွိေနတာပါ။
အခုေလာေလာဆယ္ မန္စီးတီးအသင္းက ဂရီးလစ္ရွ္နဲ႔ ဟယ္ရီကိန္းကို ပစ္မွတ္ထားေနၿပီး ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းကေတာ့ ဟယ္ရီကိန္းနဲ႔ ဒီကလန္႐ိုက္စ္ကို ေခၚဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကစားသမား(၃)ဦးရဲ႕ လက္ရွိေဈးကြက္ေပါက္ေၾကးက ေပါင္သန္း(၁၀၀)နဲ႔အထက္ရွိေနတာေၾကာင့္ တကယ္လို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ေနာက္ခံလူ မက္ဂြိဳင္းယားတင္ရွိထားတဲ့ အဂၤလန္ကစားသမားေတြထဲမွာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးအမ်ားဆုံးစံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တုန္းက လက္စတာအသင္းေနာက္ခံလူမက္ဂြိဳင္းယားကို ေနာက္ခံလူေတြထဲမွာ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးျဖစ္တဲ့ ေပါင္သန္း(၈၀)နဲ႔ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အဲဒီစံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးဖ်က္မယ့္သူ မရွိေသးပါဘူး။ ဟယ္ရီကိန္းဟာ ဆုဖလားေတြရယူဖို႔ စပါးအသင္းနဲ႔လမ္းခြဲမယ္လို႔ ယူ႐ို-၂၀၂ဝၿပိဳင္ပြဲမတိုင္ခင္ကတည္းက လူသိရွင္ၾကားဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သလို စပါးအသင္းက ဟယ္ရီကိန္းအတြက္ ေပါင္သန္း(၁၅၀)အထိအလိုရွိေနၿပီး ေပါင္သန္း(၁၀၀)တန္ေၾကးရွိတဲ့ ဝက္စ္ဟမ္းကြင္းလယ္လူဒီကလန္႐ိုက္စ္ကလည္း ထိပ္သီးအသင္းတစ္သင္းဆီ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကစားဖို႔ ဆႏၵရွိေနတာပါ။
ဂရီးလစ္ရွ္ကေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကိစၥကို ျပန္လည္စဥ္းစားမယ္လို႔ မၾကာေသးခင္က ဝန္ခံေျပာဆိုထားလို႔ ဒီ(၃)ဦးရဲ႕အေျပာင္းအေ႐ႊ႕သတင္းေတြက စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းေနပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မက္ဂြိဳင္းယားဟာ အဂၤလန္ေဘာလုံးသမားေတြထဲမွာ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနေပမယ့္ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကာလပိတ္သိမ္းဖို႔က (၅)ပတ္ေလာက္လိုေသးတာေၾကာင့္ လာမယ့္ရက္ေတြထဲမွာ ဘာမဆိုျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အေနအထားပါပဲ။
ရော်နယ်ဒင်ဟို မှော်ဆန်တဲ့ ဘောလုံး ပဉ္စလက်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းမကျ သေး
ဆန်ချို ဝတ်ဆင်မယ့် ကျောနံပါတ် ပေါက်ကြား
ချဲလ်ဆီးနဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ အံ့အားသင့်စရာ ဂိုးပေါက်ကာကွယ်မှုတစ်ခု ဘန်ဝှိုက် လုပ်ပြခဲ့
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားအများစု ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေကြ
စပါးအသင်း အတ္တလန်တာနောက်ခံလူ ခရစ္စရှန်ရိုမဲရိုးကို ပေါင်(၄၃)သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိ
အဲရစ်ဘိုင်လီ တိုကျိုအိုလံပစ်မှာ အရှက်ကွဲခဲ့
ဒီပိုင်းကတော့ အသင်းသစ်နဲ့အတူ ကောင်းမွန်တဲ့ ခြေလှမ်းကောင်းတွေနဲ့ စတင်